Ho avy ny fotoanan'ny famadihana sy ny akony - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Goavana ny fandaniana ho an’ireo mbola manaraka sy manatanteraka azy an-tsakany sy an-davany. Tsotsorina kosa ny famadihana ho an’ny sasany mba hifanaraka amin’ny fiainana sy ny zava-misy eo am-pelantanana.
Manan-karena kolontsaina sy fomban-drazana ny Malagasy, izay isan’ny sehatra lehibe iray mety mahasarika vahiny izany ho an’i Madagasikara. Fomba amam-panao be dia be no nolovaina tamin’ireo razambe, ary mbola betsaka voatazona ny ankamaroan’ireo amin’izao fotoana izao. Ho an’ny eto afovoan-tany manokana, an-kavitsiana no tsy manao famadihan-drazana na ny “vary be menaka”. Ireto volana telo mifanesy ireto no fanatanterahana io famadihana io, manomboka izao jolay izao ka mandrapahataperan’ny sepitambra. Fomban-drazana fanao isaky ny dimy taona raha haingana ary isaky ny sivy taona ny ela indrindra. Araka ny fomba fiteny andavanandro dia faritana hoe tsy hita izay maharatsy azy ity fomba ity satria korana amam-pifaliana no hihaonan’ny mpiandry fandrotrarana sy ireo taranaka na zanaka am-pielezana, hoy ny nambaran’ny raiamandreny iray izay efa eo am-panomana ny azy ireo ny faha-12 sy 13 jolay izao any Ambohibary. Ankoatra izay, dia fiaraha-misakafo vary be menaka sy famonosan-damba ireo razana no zava-dehibe amin’ity famadihan-drazana ity. Amintsika Malagasy, misy dikany ary hajaina fatratra ny razana, izany no antony tsy hanakambanana na hampidirana ny faty lena am-pasan-dehibe. “Mpanelanelana” ny olombelona amin’ny zanahary ny toeran’ny razana raha ny finoan’ny Malagasy fa tsy zavatra tompoina kosa. Misy ny mieritreritra fa manompo sampy ny mpanao famadihan-drazana kanefa tsisy valaka amin’ny fomba amam-panao rehetra eto Madagasikara izy ity. Somary misimisy ihany anefa ny fandaniana raha ny amin’ity fomba iray ity, ka farafahakeliny omby iray no vonoina ary ny vary dia arakaraka ny isan’ny olona sy ny fianakaviana nasaina ; tafiditra ao koa ny sodina sy ny zava-maneno alaina. Raha famadihan-drazana dia misy izany any aminy any amin’ny faritra hafa, toy ny “fitampoha” ho an’i Menabe ary ny “bilo” any Atsimo Andrefana.
Hampifanarahana amin’ny toetrandro ny fomba
Lasa manjavozavo ankehitriny ny fampiharana ny fomba amam-panao navelan’ireo razana, izay soatoavina malagasy sady fahendrena rahateo. “Voabaikon’ny fahasarotam-piainana daholo na ny fady aza”, raha ny teny natsipin-dRavelonandrasana Richard mpanao asa-tanana. Miankina amin’ny vola eo am-pelantanana ny fanatontosana ny lanonana ka raha kely ny miditra, dia tokony hifandanja amin’izay ihany koa ny mivoaka. Antony maro no mampisintaka ny olona amin’ny fomban-drazana toy itony na mahatonga azy ireo hiala tanteraka aza. Eo ny hamafin’ny fiainana izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin’izao, fa ny tena loza dia betsaka amintsika no mampifangaro ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ary ny fomban-drazana amin’ny fivavahana. Azo lazaina anefa fa zavatra roa tsy hampifandraisina velively ny fivavahana sy ny famadihana io noho ny iray finoana iraisan’izao tontolo izao, dia ny fanarahan-dia an’i Jesoa Kristy amin’ny ankapobeny ; ny iray fomba sy fahendrena voatokana ho an’ny Malagasy. Saingy tsotra kosa ny mampifameno azy ireo ary azo atao tsara izany. Sarotra ny hanome tsiny an’iza na iza, na ny mamadika na ny tsia. Ny maha izy azy ny firenena iray ihany koa dia ny fananany fomba mampiavaka azy manokana ary hiavahany amina firenen-kafa. Mahazo tombony araka izany ny Malagasy noho ireo fomban-drazana maro loko. Harena manokana ireo, tsy ilaina zavatra mankadiry ny mikolokolo sy mitrandraka azy toy ny fireharehana fa manan-karena amin’ny zavatra hafa, kanefa tsy hananana fitaovana akory. Afaka havadika ho fitadiavana, fa tsy fivarotana fomban-drazana mihitsy kosa.